लगातार चारपटक चुनावमा हारेपछि अन्तत: काठमाडौंमा कृष्णगोपालकोे जित | Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | २३ मंसिर २०७४, शनिबार ०९:१९ |
काठमाण्डौं-वाम गठबन्धनले एमाले र माओवादीका धेरै नेताहरुलाई चुनावी परिणाममा राहत दिएको छ । यस्तै राहत पाउनेमा एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि एक हुन् । किनकी लगातार चार पटकसम्म चुनावमा हार व्यहोरेका कृष्णगोपाल प्रतिनिधिसभा चुनावमा काठमाडौं ९ मा विजयी भएका छन् । उनले कांग्रेसका ध्यानगोविन्द रञ्जितलाई ८ हजार ५० मत अन्तरले हराए ।
कृष्णगोपालले २२ हजार ८५२ मत पाउँदै विजयी हुँदा ध्यानगोविन्दले १४ हजार ८०२ मत पाएका छन् । कृष्णगोपाल र ध्यानगोविन्द चिरपरिचित प्रतिस्पर्धी हुन् । उनीहरुबीच काठमाडौं क्षेत्रनम्बर ७ मा ०५१ को चुनावमा भिडन्त भएको थियो जसमा कृष्णगोपालले बाजी मारेका थिए ।
तर ०५६ को चुनावमा कृष्णगोपाल ७ नम्बर क्षेत्रबाटै तिर्थराम डंगोलसँग पराजित भए । त्यसपछिका लगातार तीनवटा चुनावको परिणाम पनि कृष्णगोपालको पक्षमा आएन । ०६४ को पहिलो संविधानसभा र ०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसका ध्यानगोविन्दले कृष्णगोपालसँग बदला लिए ।
त्यतिमात्रै होइन काठमाडौं क्षेत्रनम्बर २ मा भएको उपचुनावमा पनि कृष्णगोपाल हारेका थिए । दुई स्थानबाट विजयी एमाले नेता माधव नेपालले काठमाडौं २ छाडेपछि भएको उपचुनावमा कृष्णगोपाल उम्मेदवार थिए । उपचुनावमा उनी कांग्रेसका दिपक कुइँकेलसँग पराजित भएका थिए । तर संविधान जारी भएपछि नेपालमा पहिलोपटक भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने कृष्णगोपालले जित निकाल्न सफल भएका छन् ।
Previousगुल्मीमा वामगठबन्धनले अग्रता लियो, कस्तो छ मत परिणाम ?
Nextगोरखा क्षेत्र नं. २ मा डा. बाबुराम भट्टराईलाई ३६ सय मतको अग्रता
पहिरो पन्छाएपछि अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड सञ्चालनमा
१७ श्रावण २०७५, बिहीबार ११:१३
देवतालाई पनि यसरी ट्राफिक नियम पालना गराइयो
८ बैशाख २०७५, शनिबार ०८:२८